Huawei anaghịzị ezobe di na nwunye ọhụrụ 9 ma bipụta akwụkwọ mmado na-egosi ọsọ ya | Akụkọ akụrụngwa
El Huawei Mate 9 A ga-egosiputa ya n'ihu ọha na Nọvemba 3 na ihe omume nke onye nrụpụta China ga-ejide na Munich, mgbe ekwenyesịrị ya site na akwụkwọ mpịakọta nke Huawei bipụtara site n'aka akaụntụ Weibo.
Mgbe ọtụtụ asịrị banyere ngwaọrụ mkpanaka ọhụrụ a, Huawei yiri ka ọ bụkwaghị ya na mbido ọzọ ga-enwe nnukwu ike, arụmọrụ yana karịa ọsọ niile. Dịka anyị nwere ike ịhụ na posta bipụtara, anyị nwere ike ịhụ otu ụgbọ ala si apụta ọsọ ọsọ, nke ga-ezo aka ọsọ nke ngwaọrụ ahụ.
Anyị nwekwara ike ịgụ ozi ahụ "Nzọụkwụ na-aga n'ihu", nke na-ezo aka na ọganihu nke Huawei na-ezube na mwepụta nke ama a, nke ga-enwe ihuenyo 6-anụ ọhịa na ihe ọhụrụ Kirin 960 processor, nke na-anọchi azụ Apple A10.
Anyị makwaara banyere Huawei Mate 9 ọhụrụ na ọ ga-enwe 6GB RAM, nchekwa dị n'ime ya ruo 256GB na igwefoto nke Leica ga-enwe ọrụ ọzọ, nke dị ugbu a anyị amaghị ma ọ ga-abụ naanị ịgba akaebe dị ka o mere na Huawei P9 ma ọ bụ ọ ga-aga otu nzọụkwụ n'ihu.
Na Nọmba Nọvemba 3 anyị ga - ahụ Huawei Mate 9 n’ikpeazụ ma anyị ga - amata ma ọ ga - adị ndụ n’ihe niile anyị tụrụ anya ya ma ọ bụrụ n’enye anyị ọsọ ọsọ nke Huawei kwere nkwa ugbu a.
I chere na Huawei ga-eju anyị anya na Huawei Mate 9 ọhụrụ ya?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Huawei anaghịzi ezobe nwunye ọhụrụ 9 ma bipụta akwụkwọ mmado na-egosi ọsọ ya